प्रहरी महानिरीक्षक खनालको चीन भ्रमण किन गरियो अस्वीकृत? - Nepali News Nepal
प्रहरी महानिरीक्षक खनालको चीन भ्रमण किन गरियो अस्वीकृत?
डिसेम्बर 26, 2019 डिसेम्बर 26, 2019 Bishwa Ghatana0Comments नेपाल प्रहरी, प्रहरी महानिरीक्षक, सर्वोन्द्र खनाल
१० पुस २०७६ काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वोन्द्र खनालको चीन भ्रमण पनि सरकारले अस्वीकृत गरेको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आईजी खनालको चीन भ्रमण अस्वीकृत गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगै पुस २१ गते महानिरीक्षक खनालको चीन जाने कार्यक्रम थियो । तर सो कार्यक्रमलाई उल्टाउदै आईजी खनालको स्थानमा अर्का एक डिआईजीलाई पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
आईजीपी खनालको भ्रमण प्रस्ताव रद्द भएपनि भ्रमण रद्द गरिनुको कारण भने सरकारले खुलाएको छैन। उनि संगै एउटै टिममा जाने भनिएका गृहमन्त्री थापा, उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई लगायतको भ्रमण भने बैठकले अनुमोदन गरेको छ । गृहमन्त्री थापा चीनका आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयको निमन्त्रणामा चीन जान लागेका हुन्।
यसअघि सरकारले अमेरिकाको सिकागोमा हुने विश्वका प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलनमा जानका लागि अन्तिम तयारीमा रहेका खनालको भ्रमण अस्विकृत गरेको थियो ।
← सर्वोन्द्र खनाल
मेलबर्न स्टारको तेस्रो खेल आज, सन्दिपको टिममा पर्ने सम्भावना बलियो →
रोजगार : नेपाल प्रहरीमा १०७२ प्राविधिक प्रहरी जवान भर्ना माग
जनवरी 15, 2020 मे 3, 2020 Bishwa Ghatana 0
डिसेम्बर 26, 2019 डिसेम्बर 26, 2019 Bishwa Ghatana 0